Vakashela kudokotela ngesikhathi ukhulelwe
Kusukela emavikini okuqala okukhulelwa, qala ukukhuluma nodokotela wakho. Lesi yisiqinisekiso sokuthi wena nomntwana uzobe ngaphansi kokuvikelwa okuthembekile. Uthole ukuthi maduzane uzoba umama? Ungalibali ukuvakashela udokotela. Ukuze babhaliswe ngokubonisana nabesifazane, odokotela bayeluleka kuze kube sesonto lesithupha lokukhulelwa. Lokhu kuzosiza ukuvimbela izinkinga ezincane ngesikhathi. Uzodinga ukuya kudokotela ngalendlela elandelayo: okungenani kanye ngenyanga - kuze kufike isonto lama-28, kabili ngenyanga - kuze kube yiviki lama-36 kanye nezinsuku ezingu-7 - kuze kube sekuzalweni.
Ungadeleli ukuhlola! Ukuya njalo ukubonisana komama akuyona ukwelashwa (ukukhulelwa akusona isifo!), Kodwa ukuvimbela ubunzima obungalindelekile. Mhlawumbe ithuba lokuchitha amahora emtholampilo akubonakali likhangayo kuwe. Kodwa ungangeni emicabangweni emibi. Thatha umagazini umagazini ongafundiwe, umdlali ophethe i-disc oyikhonzile. Ungakwazi ukuxhumana nomntwana wakho ngengqondo nje kuphela: lena indlela enhle yokuzijabulisa. Yenza imihlangano nodokotela ngendlela ephumelelayo emithethweni elula. Lalela ngokucophelela izincomo futhi unganqikazi ukubuza mayelana nakho konke okukuthandayo. Ngaphambi kokuba uye endlini yokwamukela, cabangela imibuzo yakho. Ungathembeli kwimemori: ngesikhathi esifanele, singaphumeleka. Kungcono ukubhala konke kusengaphambili. Uma ukhathazekile ngento ethile (ukulala, ukulala, ukushayeka okukhulayo), ungacabangi ukuthi kuyinto encane, kodwa masinyane utshele udokotela.
Endaweni yokunakwa okukhethekile
Udokotela uzokunika izivivinyo eziningi ezahlukene. Ungesabi, kufanele kube njalo. Ngamunye wabo ubaluleke kakhulu, ngakho-ke banikeze ngenkuthalo, ungadluli futhi ungahlehliseli lutho ngokuhamba kwesikhathi. Ukulula okunjalo, ekuboneni kuqala, ukuhlolwa, njengokuhlolwa kwegazi jikelele, ukucacisa izinga lokushukela kuwo, nokuhlaziywa komchamo kusiza ukuvimbela izinkinga ezinkulu ezenzeka ngesikhathi sokukhulelwa.
Ukusebenzisa ukuhlolwa kwegazi okuvamile, izinga le-hemoglobin lizimisele. Lokhu kuhlolwa kuvumela udokotela ukuba aqaphele ukubonakaliswa kokuntula kwe-anemia esikhathini esithile. Lokhu kunenkinga kwenza kube nzima oksijini nezakhi ukuthi zigeleze kusukela kumama ukuya emntwaneni futhi ngokuvamile zibangelwa isisindo esinciphile ne-hypoxia emntwaneni. Ukuvimbela imiphumela enjalo, udokotela angakutshela ukuthi uthathe amalungiselelo ensimbi.
Ukwandisa ushukela wegazi - uphawu lokuthuthukiswa kwesifo sikashukela kubesifazane abakhulelwe. Lesi sifo senza ama-hormone asebenze ngesikhathi sokukhulelwa futhi avimbele ukukhiqizwa kwe-insulini emzimbeni.
Kubaluleke kakhulu ukuqapha izinga likashukela uma usengozini: esinye sezihlobo esinesifo sikashukela, unomfutho wegazi ophakeme, kancane kancane uthola isisindo noma isithelo esikhulu kakhulu. Lesi sifo sidlula emva kokubeletha, kepha-ke, kuze kuvele ukuzalwa kwengane umama ozayo udinga ukuphathwa kwezokwelapha njalo. Isifo sikashukela sinomthelela ekuphazanyeni kwezinqubo zokuxilonga umzimba futhi kubaluleke kakhulu ukukhulelwa. Ukuhlola njalo umchamo kukuvumela ukuba ubone ukuthi kukhona amaprotheni kuwo. Naphezu kokuthi owesifazane phakathi nalesi sikhathi angazizwa enempilo ngokugcwele, ukutholakala kwamaprotheni kuyisignali esiphazamisayo kakhulu yokusebenza ngokweqile. Umama ozayo uzodinga ukunakekelwa ngokucophelela kwezokwelapha futhi, ngokusobala, ukwelashwa esibhedlela.
Ngaphambilini, ukuhlolwa kokutheleleka kwe-TORCH (i-toxoplasmosis, i-rubella, i-cytomegalovirus ne-herpes) yayiyimfuneko kubo bonke abesifazane abakhulelwe. Manje ukuhlaziywa akufakiwe kuhlelo lokuhlolwa komama ngamunye. Ukutheleleka okunjalo kuyingozi kumntwana uma ukutheleleka kwenzeka ngesikhathi sokukhulelwa okokuqala. Kodwa-ke, ngokwezibalo, kungenzeka ukuthi lokhu kuncane kakhulu: abesifazane abaningi ngesikhathi sokukhulelwa kakade banesifo sengculazi kulezi zifo eziyingozi. Udokotela okuthile okusolakala ukuthi, uqoke noma wakhetha uhlolo oluye lwabonisa umphumela ongahle kangaka? Ungakhathazeki, kodwa uthola kahle. Izidakamizwa zanamuhla zinciphisa ingozi yemiphumela engathandeki. Thembela udokotela wakho! Futhi zonke izinkathazo zakho zizohlakazeka njengomusi.
Imikhiqizo enhle ewusizo yokukhulelwa
Isonto lesithathu lokukhulelwa: izimpawu
Izilwane ezifuywayo, nokubaluleka kwazo ekuthuthukiseni izingane
Ngiyakwazi yini ukugqoka nokusika izinwele zami ngesikhathi sengikhulelwe?
Ngenxa yalokho okuyi-toxicosis?
Ungasusa kanjani amafutha kusuka okhalweni lwakho ngezivivinyo?
Zingaki izinyathelo okudingeka uzishise ama-khalori?
Indlela Yokuvuselela Impilo Ngokuzivuselela Ukubuyiselwa Ngokwempilo emva kokushaya kwesisu
Ukuhamba ngesitimela: indlela yokuziphatha
Yiziphi izithelo nemifino eziwusizo kakhulu?
Amaphephadonga amnyama ngaphakathi
Okufanele ukwenze ukuze umise ingane ekulileni
Kuzoze kube nini ukugcina ubuhle nobusha
Isaladi nge-salad rocket, inkukhu kanye namagilebhisi
Izinhlanzi zengulube nge-sauce ye-ginger-soy